Dubbii Kana oromoon Quba qabaachuu Qaba!! Ergamttoonni Neftegna.. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsDubbii Kana oromoon Quba qabaachuu Qaba!! Ergamttoonni Neftegna..
Dubbii Kana Oromoon Quba qabaachuu Qaba!!Ergamttoonni Neftegna!
Obboo #LeencooLataa,Dr.#DiimaaNagawoo irra deddeebi’uun media Oromoo fi Habashaa irratti WBO kan hogganaa jiru fi ajajaa jiru Daawud isa magaalaa Finfinnee jiru akka ta’e dubbatan,ragaa itti ba’aan. Masara Mootummaa Miniliik dhaquunis #AbiyAhimadiin gorsan.yoo Jaal.Daawudiin dhabamsiise qabsoon hidhannoo hin laafa,hin bada jedhanii irra deddeebi’uun gorsa laataafii turan.
Kana sababeeffachuun Abiy ji’a shan dura Dr.Mararaa fi Jaal.Daawudiin karaa #ShimallisAbdiisaa bilbilaan waamsise. Kan achitti argame gantoota ABO keessaa ganan kan akka #QajeelaaMardaasaa,#ToleeraaAdabaa ,…. warra durii keessaa Obbo #GalaasaaDilboo,Obbo #LeencooLataa,Dr.#DiimaaNagoo…
,Jaal.#Daawud fi Dr.#Mararaa turan.
Dr.#Mararaa,#LeencooLataa,#DimaaNagoo,#GalaasaaDilboo isaan kun jaarsa araaraa fi dubbii fixan ta’anii muudaman. Dr.Mararaa dubbichi liqimfamufii didnaan aniyyu himataadha maalan araara buusa gara jechuutti deeme. Galaasaanis dhimma kana Daawudfaan haa xumuratan malee gidduu galuun keenya bu’aa waan buusu qaba hin fakkaatu jedhe.
Leencoo Lataan immoo Daawudtu dida malee inni tole jennaan torbee lamatti xumurra jechuun dubbii Jaal.Daawuditti akeeke. Toleeraa Adabaa fi Qajeelaan dubbii Leencoo harkaa fudhatanii Jaal.Daawuditti jechoota akka qara eeboo nama waraanan darbachuutti seenan. Jaal.Daawud kuta dubbii jala sararee dubbachuutti seene. ” Nuti keessoo keenya seera dhaabichaan furanna.anaaf Mararaan waamicha kana simannee kan dhufneef haala siyaasa yeroo Oromoo irratti marii goonaa,gaaffileen keenya karaa nagaa fi mariin nuuf deebi’aa laata,Mootummaan Oromoo ajjeesaa jiru yaada jijjiirratee mariif nu waamee jennee dhufne malee dhimma keessoo ABO irratti ajandaa guddaa goonee haasofna hin seene,Ani kanan biyyatti gale Oromoo sabakoo abdadheeni.ati humna qabda,yeroonis keeti,akka na ajjeesuuf na gaaddus beeka,na ajjeefta malee ABOnis ta’e ani OPDOf bitamnee hin bullu.OPDO fi ati akka barbaaddan nu ajajuu irra du’akoon filadha” jechuun dubbiin Jaal.Daawud dubbate Abiyyiin caalaa Leencoo Mataa naasisee illee lamaaniin dafqa yaasise!!! Hunduu na’anii uusan.Abiyyis dhaadannoo baratame fi ajaja isaa dabarsee sokke.
Taateen kun ji’oota shan dura waan raawwatamedha.lafarra gangalachaa dhufuun akkuma gorsa Dr.Diimaa fi Leencoo Lataatti Abiy Jaal.Daawudiin ajjeesuuf toftaan inni jalqabaa mana keessatti ukkaamsee dhahannaa laphee Oromoo fi Addunyaa dhaggeeffachuudha.kana immoo erga gochuu eegale ji’a darbe. Itti aansuun akkuma Dargiin H/Sillaasee manuma keessatti ukkaamsee dhabamsiise,Jaal.Daawudiniis manuma mataa isaanii keessatti ajjeesuuf akka saganteeffate ragaaleen dhaadannoo Jaal.Daawud irratti Abiy kana dura Masaratti waamee dorsisaan makee dhaadachaa ture agarsiiftuu kanaati.
Kan Dr.Diimaa interview #AhaduMedia irratti akka Jaal.Daawud Finfinnee taa’ee WBO hogganaa jiru dubbatan,kan Leencoon yeroo garaagaraatti akka Jaal.Daawud WBOf ajaja dabarsaa jirutti dubbatan,kan Abiy gorsa jara lamaan kana fudhatee Jaal.Daawudiin ajjeesuuf murteeffate ragaaleen sobaa kun hundi inaaffaa fi jibba irraa kan ka’e malee dhugaa miti. Ragaan kanaa erga Jaal.Daawud uggurame boodas WBOn hojii isaa itti fufee injifannoolee karaa Zoonii Kibbaas ta’e Lixaa,karaa Gidduu Galeessaas galmeessaa jira. Kun ajaja Jaal.Daawudiin WBOn akka socho’aa hin jirre fi WBOn hoggana mataa isaatiin,istraateejii ofii qopheeffateen akka lolaa jiru ifadha.
Qabsoo Oromoo keessatti garuu ciichaan abbaa ejjannoo kan akka Jaal.Daawud kongomaa hin barbaachisu. Isa Manaan,Konkolaataan,Angoon sossobamu malee isa kaayyootti ciichee danqaraa ta’u empire Ethiopia hin keessumeessitu.qabsoon Oromoos ciichaa akkasii,hoggana amanamaa fi ejjannoo qabu argitee hin beektu.kanaaf namni akkasii WBO hogganes dhiisees ajjeefamuu fi karaa irraa dhabamsiifamuun murteessaa ta’eetu itti muldhateera PP fi gorsitoota PP ija duratti.
Dhaamsikoo Goota har’a si mararuu dide,bor gaafanni wareegame wayyoo nama jabaa dhabne jachuurra har’uma dirmadhuuf.Abiy akka Jaal.Daawudiin ajjeesuuf kutate har’a miti gaafa Masaratti waamee doorsise,doorsisa Abiyyitti Jaal.Daawud kolfinaan narraa ba’i ati nagaa hin qabdu jedhee,Dr.Mararaa waamuun hiriyyaakee gorsi gaafa jedhe,Abiy karoora Jaal.Daawudiin ajjeesuu qiyyaafate. Har’a Abiy dhahannaa Onnee saba Oromoo safaraa jira.bor ajjeesee nutti agarsiisuuf deema.utuu hin durfamiin dursuun yoo qalbii qabaannedha.